Ao anatin’ny vanim-potoan’ny fahavaratra isika amin’izao fotoana izao. Ao anatin’ny vanim-potoan’ny rivodoza ihany koa. Amin’ny maha nosy an’i Madagasikara mantsy, matetika handalovan’ny rivodoza hatrany. Noho izany indrindra, dia manamafy fiaraha-miasa amin’ny mpilatsaka an-tsitrapo ny minisiteran’ny …Tohiny
Laharam-pahamehana ho an’i Lalao Ravalomanana nandritra ny fanokafana ny fivorian’ny filankevitra monisipaly androany ny fanokafana haino aman-jery eo anivon’ ny kaominina Antananarivo, na dia efa mazava aza fa ny tetibolan’ ny kaominina no tokony ho …Tohiny
Azo tsapain-tanana ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Tahaka ity nitranga teny amin’ny borigadin’ny zandary etsy Itaosy ity, dia tena ohatra velona azo tahafin’ny zandary rehetra mihitsy. Tonga nandrabiraby lelavola 190 000 Ariary , …Tohiny
Rivodoza AVA : Hiditra any Toamasina rahampitso maraina
Lasa rivodoza matanjaka ilay andro ratsy niforona tao Atsinanan’Antalaha, omaly tamin’ny 9ora maraina ary nomena ny anarana hoe AVA. Araka ny vaovao farany avy tamin’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro, tokony ho tamin’ny 4ora hariva, omaly …Tohiny